धार्चे र चुमनुब्रीमा कन्ट्याक ट्रेसिङ दर बढाऔ | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
धार्चे र चुमनुब्रीमा कन्ट्याक ट्रेसिङ दर बढाऔ
Published On : २७ असार २०७८, आईतवार १२:२२
धार्चे गाउँपालिकाका सातजना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पालिकाका लेखा शाखा, योजना शाखा, प्राविधिक शाखा, राजस्व शाखा, कृषि शाखा, पशु शाखा र वडा सचिवलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
असार मसान्तको योजना फस्र्यौट गर्ने चटारोमा सबैभन्दा सक्रिय रहने यी नै शाखा हुन् । यी नै कर्मचारी हुन् । उनीहरुसँग सबै वडाका टोलटोलका उपभोक्ता समिति कुनै न कुनै रुपमा कन्ट्याकमा पुगेका छन् । नपुगी साध्यै पनि छैन ।
पालिकाले उनीहरुलाई अलग्गै राखेर काम गराएको त भनेको छ परन्तु, थाहा पाएर, नपाएर कुनै न कुनै रुपमा उनीहरुको कन्ट्याक्ट गाउँलेसँग भएको छ । त्यसैले यसलाई संवेदनशील रुपमा लिऔँ र ती कर्मचारीसँग सन्निकट रहेर काम गर्ने सबैको कन्ट्याक टूेसिङको आधारमा पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ ।
उनीहरु पनि आफै संक्रमित रहेर पनि आराम, विश्राम नगरी अहोरात्र खटिनु परेको छ । कोही लक्षणसहितका संक्रमित छन्, कोही लक्षण बिनाका । लक्षणसहितका संक्रमितहरु प्राय बिरामी छन् । उनीहरुलाई उपचार र आरामको जरुरत छ तर जनशक्ति अभावका कारण पालिकाले उनीहरुलाई काममा लगाइरहेको छ ।
धार्चे मात्र होइन, चुमनुब्री गाउँपालिकाका सबैउपभोक्ता समितिका पदाधिकारी अहिले गोरखा बजारमा छन् । बिल भरपाई फस्र्यौटका लागि उनीहरु झण्डै सातादस दिनदेखि गोरखा बजारमा आएका हुन् ।
उनीहरु सदरमुकाममा घुलमिल भएर कोही गाउँ फर्किएका छन्, कोही काठमाडौँ पुगेका छन् । उनीहरुमध्य एकजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको छ । सोको कन्ट्याक टूेसिङ गर्दा भयाबह अबस्था आउने सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैले चुमनुब्री जो, कोभिडका हिसाबले चोखो थियो, अहिलेको दृश्य शंकास्पद देखियो । धार्चेको पनि सेवाग्राहीलाई कन्ट्याक टूेसिङ गर्दा पिसिआर पोजेटिभ देखिने निश्चित छ । त्यसैले कन्ट्याक टूेसिङको दायरा बढाउनु पर्छ ।